Tartanka dunida ee (sauna:da) oo si naxdin badan kusoo afjarmay – Dentist Care – Nationwide Dentist Directory
Tartanka dunida ee (sauna:da) oo si naxdin badan kusoo afjarmay
Aug 09, 2010 with Comments 1
Tartanka (Saunada) oo ahaa mid ey kasoo qeyb galeen dad ka badan 100 qof oo isaga yimid dalal badan ayaa asbuuci hore dhamadkiisa lagu qabtay magalada Heinola ee wadanka Finland. Tartanka oo lagu loolamayay u adkeysiga kulka ama xaraarada usareysa ee u xamili karo jirka qofka. Tartankan ayaa kusoo dhamaday si naxdin leh kadib markii labada nin ee finalka isugu yimid midkood geeriyoday.
Labada nin ee finalka isugu soo baxay ayaa u kala dhashay dalalka Finland iyo Russia, iyadoo dadoodu aheyd 40 jir iyo 60 jir. Ninka finlandeyska ayaa ahaa ninki kaalinta koowaad ku guuleystay sanadkii hore, ninka kale ee u dhashay dalka ruushka ayaa isna sanadkii hore dunida ka galay kaalinta sadexaad
Labadaan nin ayaa saunada loo geeyay 110 garaad, iyadoo ey marwalba lasocdeen xaaladooda gurmadka caafimaadka. Nimankaan ayaa suulka kor utagayey, markey xaladoodu caadi tahay. Waxey isla gaareen 5 daqiiqo, markey kor udhaafeen shanta daqiiro ayaa heegan culus ey galeen gurmadka caafimadka, iyagoo laba jibaaray jug jugeynta albaabka iyo il kuhaynta labada ciyaaryahan. markii saacadu kor udhaftay lix minid ayaa ninkii finishka miyir beelay oo wuxuu ku dul dhacay ninkii kale, ninkii kale ayaa caadi umuuqday, waliba garsoorayaasha suulka utaagay. kadib ayaa labadii nin laga soo saaray saunada, iyagoo gubtay.
Tartankan oo ah mid aad loogu dhidid baxo, lagu gubto, qatarna u ah xibnaha jirka bini’aadimka ayaa, markii ciyartooda laga soo saaro, waxaa lagu boobaa gargaarka degdega ah. Labadaan nin ayaa markii lagu sameenayay gargarka degdega ah, waxaa laga warhelay ninkii guuleystay ee Ruushka udhashay inuu nafbaxay.
Tartamadan ayey hada kahor dhaleeceyn usoo jeediyeen dhaqatiir ku doodeysa inuu yahay mid qatar badan leh kuna sidaas awgeedna la joojiyo. Laakiin qabanqabiyasha tartanka ayaa ku doodaya in tartanka uu yahay wax ey dhaqan uleeyihiin, shuruuc fiicana udajiyeen.
Previous Previous post: Last minute stocking stuffers: tickets!
Next Next post: Actos lawyer minneapolis minnesota